Assistant Manager | Mo Mo Play ﻿
14.12.2019, Full time , Service
Company: Mo Mo Play
Mo Mo Play was founded in 2016 and designed to provide excellent value by raising heart and the body training emotion intellectual & social skills.
Work location MomoPlay Office,2nd Floor,212-B,Myanmar Plaza
MomoPlay ( စိန်ဂျွန်း ) ၊ MomoPlay ( မြန်မာပလာစာ )၊
MomoPlay ( ဝေဇယန္တာ Orange ) ၊ ရန်ကုန်မြို့။
Company Industry: Assistant Manager
Job posted: 14/12/2019
• Createasecure and quality learning environment for children aged 18 months to6years old • Design and implementaholistic curriculum to enhance children's learning • Build trusting and respectful partnerships with parents, families and other key stakeholders
•	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
•	Assist clients in resolving issues •	To Complete Customer Records promptly and accurately •	Good communication and interpersonal skills
Operation Manager M/F (1)
•	Age of 30 and above. •	Operation Manager (Play Ground)
•	ရုပ်ရည်အသင့်အတင့်ပြေပြစ်ချောမွေသူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
•	Communication Skill ကောင်းမွန်ရမည်။ •	Presentation skillကောင်းမွန်ရမည်။ •	Public Relationကောင်းမွန်ရမည်။ •	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံအုပ်ချူပ်နိုင်ရမည်။
•	Good communication and interpersonal skills. •	Good communication skills in English.
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့််ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်ကောင်းမွန်ရမည်။
•	Leadership & Communication ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	အဖွဲ့အစည်းနှင့်လုပ်ဆောင်လျက်ရှိသော လုပ်ငန်းစဉ်များကို လုပ်ကိုင်နိုင်ရမည် •	ပြဿနာများကိုဖြေရှင်းနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
347 Days, Full time , Service
•	ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	သန့်ရှင်းသပ်ရပ်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရိုးသားကြိုးစားသူဖြစ်ရမည်။
HR Assistant M (5)
347 Days, Full time , 250 000 - 300 000 Ks, Service
must have payroll experience must known well labour law must known SSB Procedure must known incometax calculation and procedure must known in office all the job must known every HR duties
•	အကျင့်စာရိတ္တကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။ •	ရေရှည်လုပ်ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ •	လက်အောက်ငယ်သားများကိုစီမံအုပ်ချုပ်နိုင်ရမည်။
Assistant Manager Admin,Secretarial & PA jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss Jobsinyangon Mo Mo Play Admin, Secretarial & PA jobs Admin, Secretarial & PA jobs Assistant Manager Jobs in Myanmar, jobs in Yangon
Hyspot Electrical Engineering Group
Six Lions Development Co.,Ltd